Ezona fonti zejiyometri zingcono | Abadali be-Intanethi
Ezona fonti zejiyometri
Esinye sezigqibo ezisisiseko xa ujongene neprojekthi kukukhetha ifonti efanelekileyo kolo yilo. Uhlobo ngalunye lochwethezo esilubonayo olusingqongileyo lwenziwe lunomsebenzi othile kwaye ke ngoko, akufanelekile ukukhetha nayiphi na. Sele sizazi iindidi ezininzi zeefonti ezikhoyo kwaye zohlulwe ngokwamaqela amane: i-serif, i-sans serif, iscript okanye incwadana kunye nokuhombisa.
Ngoku banjalo iibrendi ezininzi ezizinikele ekusebenziseni iifonti zejometri ukudala umfanekiso wokulula kunye nokucoceka. Kule post, siza kufumanisa ukuba yintoni esemva kwezi fonti zejometri kwaye siza kwenza ukhetho, onokuthi uluphose kwikhathalogu yakho yokuchwetheza.
1 Uhlobo lohlobo
1.1 Serif okanye serif typography
1.2 I-Sans serif okanye i-sans serif typography
1.3 Iscript okanye iifonti zesandla
2 Ziziphi iifonti zejometri?
3 Ezona fonti zejiyometri
3.1 Igadi efanelekileyo
3.4 Inkulungwane yeGothic
3.9 Ipro Wax
Iifonti ziyakwazi ukucwangciswa ngeendlela ezahlukeneyo, kodwa kulo mzekelo siza kugxila kwi-anatomy yawo, ngoko ke siya kuwahlula ngokwamaqela amane apho siya kuzifumana khona; i-serif typeface, i-sans serif typeface, i-script faceface kunye nohlobo lokuhombisa.
Ngaphambi kokuba ungene ngokupheleleyo kwiifonti zejometri, kuya kufuneka wazi ukuba athini amaqela amakhulu ukuze ukwahlula ifonti enye kwenye.
Serif okanye serif typography
Into ebonakalisa eli qela lochwethezo yi ukusetyenziswa kweserif kubalinganiswa bakho. Olu hlobo lokuchwetheza lunemvelaphi kwimizobo yokuqala yamatye, ekubeni le fandesi yayisetyenziselwa ukugqiba ngokulula oonobumba ngetshizi.
Ngokubanzi zenzelwe ukusetyenziswa iibhloko ezinde zombhalo, njengoko olu hlobo lochwethezo lunceda ukwenza ukufunda kukhawuleze, enkosi kwifandesi enayo, nto leyo ethanda ukufundwa kwayo.
I-Sans serif okanye i-sans serif typography
Olu chwethezo alunazo iiserif, iimpawu zakhe zithe tye kwaye zinemivumbo efanayo. Kule meko, okokuqala zivela kwimbali kwinqanaba le-industrial revolution, lisetyenziswe kwiipowusta.
Usetyenziso lwayo oluphambili lwemibhalo emifutshane, ekubeni ilulwimi olungenayo i-serifs, ayifanelekanga ukufunda iitekisi ezixineneyo.
Basenokubizwa ngokuba yi-cursive, baziwa ngenkalo yabo yezandla, leyo ilinganisa umbhalo wesandla. Olu chwethezo luhlala lusebenzisa i-ligatures okanye imihombiso xa udibanisa iileta.
Owona msebenzi wayo uphambili kukusetyenziswa kwiisignesha okanye amabinzana amafutshane, njengakwisihloko sesahluko sencwadi, ekubeni luchwethezo olungafundeki kakuhle.
Nje ukuba sazi ukuba ngawaphi amaqela iintlobo ezahlukeneyo zokuchwetheza zihlelwe, kufuneka sazi ukuba zeziphi iintlobo zejometri.
Ziziphi iifonti zejometri?
Njengoko sele sibonile, olu luhlu lwetypographic lusebenza njengenkqubo yokuchongwa okubonakalayo, Umthombo ngamnye uneempawu zawo.. Ezi nkcukacha zinokusetyenziswa ekukhetheni ifonti echanekileyo kumsebenzi ngamnye, ukuyiqwalasela, ukuyihlalutya nokuhlela.
Iifonti zejiyometri zifunyanwa phakathi kokuhlelwa kweefonti ze-sans serif okanye ze-sans serif. Oko kukuthi, zizinto zokuchwetheza ezingenayo iifandesi okanye ezichumileyo. Zibonakaliswa ngemigca elula kwaye ecocekileyo.
Luhlobo lochwethezo lwe-sans-serif, yakhiwe ukusuka kwiimilo zejometri, imivimbo efanayo isetyenziselwa ukudala iimpawu ezininzi ngangokunokwenzeka, umehluko phakathi kwabo ngamnye uncinci
Okulandelayo siza kuthetha malunga ezona fonti zejometri onokuthi uzifumane ukuse uyilo lwakho ukuya kwelona nqanaba liphezulu.
Ukuchwetheza okuphefumlelwe yilogo eyenziwe ngumyili uHerb Lubalin kwimagazini ye-Avant Garde ngo-1967, kwaye eya kuthi kamva ihlengahlengiswe kunye nomchwethezi wokuchwetheza uTom Carnase.
Luyilo lwejiyometri, yakhiwe ngezangqa kunye nemigca ethe tye. Ngobude obubonakalayo be-X, obunika inkangeleko eqinileyo neyangoku.
I-Sans serif typeface eyilwe nguPaul Renner ngo-1927. Ithathwa njengefonti yangoku kunye nento yokumelwa kwe-avant-garde yaseYurophu. Uphefumlelwe ngesitayela sejometri ye-Bauhaus, elula, yanamhlanje kwaye esebenzayo.
I-Futura typeface isebenzisa imivumbo ebanzi yokukhupha umahluko phakathi koonobumba bayo, ukongeza kwiimilo zejometri ezisisiseko. Uphawu lwale fonti kukuba abantu abanyukayo kunye nokuhla konobumba bayo abancinane bade kunabo boonobumba bayo abakhulu.
I-geometric typography, apho sinokujonga khona umxube weemilo zesetyhula ezinemigca ethe tye kunye nemigca emifutshane, iphefumlelwe Likamva. Ifonti yePantra inobunzima obune obahlukeneyo okusebenza ngabo kwiitekisi zethu.
Olu hlobo lochwethezo lwejiyometri lwazalwa ngokubulela kwisiseko seMonotype, esekwe kuchwethezo lweNkulungwane yaMashumi amabini nguSol Hess, owadalwa phakathi kuka-1937 no-1947, weMonotype Lanston. ukukhangela isimbo esifana neFutura, kodwa ngobude obuphezulu be-X kunye nokuguqula iileta zayo ukuphucula ukuveliswa kwayo kwimidiya yedijithali.
I-Century Gothic yi-typeface engenalo utshintsho kubunzima beestroke zayo. Enye yezinto eziyahlulayo kweminye imithombo kukuyo unobumba u-G ngonobumba abancinane kunye nokungabikho kophondo oluhlayo ngonobumba omncinci u-U.
Ngowe-1925, uWalter Gropius wagunyazisa uyilo lwe i-typography yokuyisebenzisa kulo lonke unxibelelwano lwesikolo saseBauhaus. U-Herbert Bayer, umyili wacinga ngomlinganiswa wendalo yonke, i-geometric sans serif typeface.
Lo mlinganiswa wendalo iphela, njengoko wayebizwa ngelo xesha, uye waphinda wahlengahlengiswa izihlandlo ezininzi kwimbali de kwangowe-1975, xa uVictor Caruso ekunye no-Ed Benguiat benza i-ITC Bauhaus typeface.
UGilroy ngu i-geometric typography enezinto ezininzi ezinokwenzeka, inobukhulu obahlukeneyo obungama-20 kunye neentlobo ezifikelela kwi-10 zamagama akekeleyo, kunye noonobumba bezinye iilwimi, njengesiCyrillic. Inobunzima obubini, ukukhanya kunye ne-extrabold ukuze ukwazi ukusebenza ngayo.
Ukuchwetheza I-sans serif enesitayile sohlobo lwejometri, nangona kukho abo bathi inokuba yinxalenye ye-typography ye-humanism ngenxa yezinye iimpawu zayo. Iyilwe nguAdrian Frutiger omkhulu ngo-1988.
Ikamva libe li i-typography esetyenziswa ngokubanzi xa kusenziwa iimpawu zenkampani kuba ifundeka lula kwaye inobuxhakaxhaka bokuchwetheza.
Olu chwethezo luzalwa kwizandla zomyili owaziwayo uNeville Brody. Yayiyilelwe ekuqaleni intloko yemasti yemagazini yaseArena ngo-1986, yaze yakhululwa nguLinotype ngo-1989 njengohlobo lokubhala. iibheji eyakhiwe ngeemilo zejometri ezisisiseko, ezibonisa impembelelo ecacileyo yeNew Typography yaseBauhaus.
Ibheji kuyilo lwakho, ixuba iifom ngoonobumba bayo abangqukuva, kunye nezinye ezithe ngqo kunye namanzi, eyahlula kwezinye iifonti.
ukuchwetheza nge imigca emincinci evulekileyo nexineneyo, ingokwentsapho yeCera Collection typography, apho sifumana khona, iCera Stencil, iCera Condensed, iCera Brush kunye neCera Round, yintsapho ehlanganisa zonke izitayela ezinokwenzeka.
Iintlobo zochwethezo zejiyometri ayinaxesha kwaye inezinto ezininzi, lukhetho oludumileyo loyilo lwelogo yophawu, ukupakishwa, njl. Zilula, iifonti ezintle ezinokuguquguquka okukhulu, kuba ifonti yejometri inokusetyenziselwa iiprojekthi ezininzi.
Ukuba ubukhangela iifonti zejometri, kwesi sithuba sikushiyele enye ukhetho lwezona zilungileyo, zijonge kwaye uqalise ukuzisebenzisa kuyilo lwakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ezona fonti zejiyometri
ngubani owadala i-youtube
Uyenza njani ifayile yeSVG